“Nahoana i Edward Snowden No Maniry Hitady Fialokalofana Any Polonina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2014 0:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Magyar, বাংলা, Français, Español
Nilaza ny vodka Poloney Sobieski tao amin'ny habakany fa tao Polonina no toerana nipoiran’ny vodka fa tsy tao Rosia, araka ny heverin'ny maro. Na dia izany aza, ny tena mahasarika ny saina mikasika ity vokatra ity dia ny fampiasana an'ilay mpanao ampamoaka Edward Snowden tamin'ny dokambarotrany vaovao. Tamin'ny taon-dasa, i Snowden no namoaka (voalohany) ny rafitra elektronika goavana fanarahamaso an'ny (NSA) Sampam-pitsikilovana Amerikana.
Naka ireto sary manaraka ireto tao amin'ny faritra mifanolo-bodirindrina ao SoHo, New York ny mpanoratra ity lahatsoratra (amin'ny teny anglisy) ity. Hoy ny fivakin'ny dokambarotra: «Nahoana i Edward Snowden no maniry hitady fialokalofana any Polonina “:
Naka sary ilay dokambarotra diso toerana ihany koa ny mpiara-miasa aminay ato amin'ny Global Voices, Jillian C. York:
hahaha: Nahoana i Edward Snowden no maniry hitady fialokalofana any Polonina
Ny zavatra tena mahatsikaiky, araka ny voalaza ao amin'ny dokambarotra, dia nangataka fialokalofana poitika any Polonina i Edward Snowden, saingy nanoratra tao amin'ny kaonty Twitter-ny ny minisitry ny Raharaham-bahiny Radoslaw Sikorski fa “tsy hanome valiny mahafa-po izy”.
Nanjary malaza herintaona i Snowden noho ny ampamoaka nataony momba ny fanatanterahan'ny NSA ny fomba fanarahamaso manerantany ataony tamin'ny alalan'ny fandaharan'asa PRISM hanangonana tahirinkevitr'olona manokana amina miliara. Nanomboka teo, niteraka korontana diplaomatika manerantany i Snowden ary nopetahan'ireo mpanohana azy ho maherifo sy ny mpanohitra azy ho mpamadika..
Lasa vaovao indray i Snowden taorian'ny nanekeny hiantsafa manokana amin'i Brian William, mpanolotra ny vaovaon'ny NBC, ao Moskoa. Havoaka amin'ny Alarobia 28 Mey izany resadresaka izany.